हामी आज्ञाकारी जनता ! | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
हामी आज्ञाकारी जनता !
हामी नेपाली जनता ज्यादै विश्वास गर्ने, हिजो राजसंस्था सित जोडिएका नेताहरुले जेजे भन्यो त्यही मान्यौं । त्यसपूर्व राणाजीहरुले जे जे भन्यो त्यही मान्यौं । वि.सं. २०४६ पछि पनि हाम्रा जन प्रतिनिधिहरुले जे जे भन्यो त्यही मान्यौं । त्यसपछि माओवादी लगायत ७ दलले जे जे भन्यो माने नमाने पनि त्यही सह्यौं । आज पनि जसले जति बोल्न सक्यो र भन्न सक्यो त्यही मानी राखेका छौं ।
२००७, २०१७, २०३६, २०४६, २०६२÷६३ मा नेता, पार्टी, राजाहरु मध्ये कसले भने गरेका कामहरु ठीक थिए थिएनन् आज ठिक छन् वा बेठीक हामीले कसरी ठीक बेठीक भन्ने मैले त आफै बुझ्न सकेको छैन । नेताहरुले हामी माथि शासन गरी रहेका छन् कि हामी जनताले नेतालाई हाम्रो लागि काम गर्न लगाएका छौं । जसले जे भन्यो हामी किन मान्दै गएका छौं । के हामी पाडो फालेका भैंसी, आज हाम्रा युवायुवतीलाई डो¥याएर गाई गोरु चर्न लगेझैं खाडी मुुलुकहरुले किन लगि रहेका छन् र हामीले किन लैजान दिई रहेका छौं । लैजान दिनु राम्रो कि नराम्रो ? कसरी बुझ्ने के कुनै दलालले हामीलाई विक्री गरी रहेको त छैन । हामी जनताले नेपाल आमाको लागि बाँच्ने कि नेताहरुको लागि ?
हिजोका नेताहरुको काम कुरा नीति राम्रो हो भने पटक पटक किन फेरी रहेका छौं विचारहरु । के विचार विज्ञानले यस्तै कुरा सिकाउछन् ? के यो संस्कार राम्रो हो ? अझै हामीले कसरी विश्वास गर्ने वर्तमानले भविष्य राम्रो बनाउने हो भनेर कसरी भन्ने ? त्यसकारण नेपालले आज सम्म चरित्रवान नेता नपाउनाको कारण के होला ? गम्भीर सोच नागरिक समाजमा उत्पन्न हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । संघ, संस्था, न्याय क्षेत्र, राजदुत लगायतका सबैको पजनीमा राजनीति देखिन्छ ।
सरकार बनाउन हाम्रा नेताहरुले ३ महिने ४ महिने मिलापत्र गर्नु परेको छ । भोलीका दिनमा त्यो बदनियत हट्ने नै छ भनी हामीले विश्वास नगरी नहुने, गरे धोका हुने । जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सुरक्षा भत्ता बृद्धि र देशलाई पुरै मैले कब्जा गर्न पाउँ भन्ने होडबाजी चलेको छ ।
विदेशीहरुले पनि नेपाली नेतालाई आफ्नो बनाउन चाहेका छन् भने हाम्रा नेताहरुले पनि छिमेकीलाई आफ्नो बनाउन द्वन्दकालमा पाकिस्तानबाट हतियार नलिई भारतबाट नै लिएका थिए भने हामी जनता विश्वास गर्ने जनता अब बन्दुक प्रति पनि विश्वास गर्नूको अर्थ के हो हामी आफै
बुझ्दैनौं । प्रेमले सत्ता लिनुपर्छ मारकाटका काम असभ्य भइसके ।
पंक्तिकारले २०५४ को स्थानिय मतगणना मात्र गरेन त्यसपछिका सभासदहरुका मत गणना र २०५४ पूर्व सबै निर्वाचन २०३६ देखि लगातार मत गणनामा भाग लिएकोले केही कुरा थाहा छ । आज वैज्ञानिक युगमा मतदानको नतिजा २४ घण्टा भित्र निस्कनु पर्नेमा महिना दिन हुदैछ । हार्ने जुवारीले तास च्यातेझै मतपत्र च्यातेका छन्, के यो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र
← ग्रामीण सडकहरुको सीमाना छुट्याउनुपर्ने
राजा वीरेन्द्रको सम्झना →